Fursadaha Tabaruca ee Qoysaska iyo Carruurta | Tonka Adeegaa
Dhammaan mutadawiciinta, ururada aan macaash doonka ahayn ee caawiya dhallaanka iyo qoysaskooda iyagoo siinaya gogosha, dharka, bustayaal iyo sahayda carruurta.
Bixiyeyaal Farxad Leh
Waxaan siinaa boorsooyinka hadiyadaha dhalashada ee ay ka buuxdo alaabada caruurtu ku ciyaaraan sariirta cuntada iyo hoyga si waaliddiinta saboolnimada ku nool ay ubadkooda u siiyaan hadiyad dhalasho.
Xannaanada Dhibaatada ee Minneapolis
GMCN waxay taageertaa qoysaska dhibaatada ku jira waxayna ka shaqeysaa ka hortagga xadgudubka iyo dayaca carruurta. Kooxuhu waxay u baahnaayeen inay bixiyaan cunno iyo cunto fudud, waxay qabtaan mashaariic farshaxan, akhris iyo daryeel ilmo.
Wada-hawlgalayaasha Bulshada ee Diinta Wadaagga
Fursado badan oo shaqsiyaad iyo kooxo si ay uga caawiyaan khaanadaha cuntada, Dukaan iibka iibka ah ee 'Resale 101', dukaammada cuntada, ka dib taageerada shaqada guriga, waxay korsadaan qoys, Seexasho guryo la awoodi karo.
Tabaruceyaashu waxay ka caawiyaan daryeelka carruurta, la-talinta xirfadaha, karinta qoysaska, howlaha maamulka, fududeynta Xirfadaha Nolosha, umeerin, lacag ururin iyo dhacdooyin gaar ah.
Kibirka Mashruuca Nolosha
Hay'ad aan macaash doon ahayn oo la shaqeysa shaqsiyaadka dakhligoodu hooseeyo iyo qoysaska. Fursadaha waxaa ka mid ah la talin, umeerin, ciyaaro isboorti iyo mashaariic gaar ah.
AVIVO (oo hore loo QAADAY )
AVIVO waxay leedahay fursado aad kula wadaagi karto hibadaada oo aad wax uga badasho nolosha dadka kale! Fadlan sahaminta fursadaha kala duwan ee hoos ku taxan ee ka caawiya ragga, haweenka iyo qoysaskooda AVIVO inay gaaraan guul shaqsiyeed, shucuureed iyo dhaqaale.
Xarunta Kheyraadka ee qoysaska ku dhibaateysan xaafadaha galbeedka. Waxay ubaahantahay kooxo iyo shaqsiyaad ka caawiya darawallada Dib ugu noqoshada dugsiga, Wear Jiilaalka Diiran, Laabta Ciyaarta, Lacag aruurinta fijaannada madhan iyo inbadan.
Wadaagista iyo Daryeelka Gacmaha
Sii guryo deg deg ah, cunno iyo adeegyo loogu talagalay qoysaska la soo deristay hoy la'aanta. Tabaruceyaashu waxay diyaariyaan cunno waxayna abaabulaan wadayaal cunto iyo agab. Waxaad ubaahantahay caawiyeyaasha xanaanada cunugga maalin walba goobta Mary. Shakhsiyaadka iyo kooxaha ayaa soo dhaweynaya.
Dadka U adeegaya Dadka
Dadka U adeegaya Dadku waxay bixiyaan guriyayn deg deg ah iyo adeegyo jaaliyadeed oo ka caawiya qoysaska la soo deristay hoy la'aanta inay noqdaan kuwo isku filan oo ay dib ula xiriiraan bulshada. Tabaruceyaashu waxay u baahdeen inay u adeegaan cunto, u qorsheeyaan dhacdooyinka carruurta, iyo mashaariic gaar ah.
Hoyga dhibbanayaasha xadgudubka guriga iyo carruurtooda. Shakhsiyaadka loo baahan yahay inay bixiyaan daryeelka ilmaha inta lagu jiro shirarka fiidkii, tababarka la siiyay. Kooxo loogu baahan yahay mashaariic gaar ah iyo in loo sameeyo darawallo waxyaabaha loo baahan yahay.
Kaalin firfircoon ka qaad xoojinta bulshadeena adoo ku tabarucaya Y. Waqtigaaga iyo hibadaadu waxay inalala socdaan waddo dheer oo naga caawiyaan sidii loo abuuri lahaa beel nabdoon oo wax ku ool ah oo ah meel wanaagsan oo lagu noolaado oo laga shaqeeyo.